I-Castlehaven, i-Cottage ngaseLwandle
Skibbereen , County Cork, Ireland
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguThomas And Jane
Indlwana engaqhelekanga engaqhelekanga ehleli ecaleni kweCastlehaven strand kwinqanaba eliphakamileyo lijonge ngaseCastletownshend, iziqithi ezikude neCastlehaven kunye neReen Point. Umhombiso obukekayo wolwandle kwindawo ethe cwaka ezolileyo yothando ngelixa uphakathi kweWest Corks imbonakalo entle kunye nokutya kwasekhaya. Uhambo olufutshane oluya kwilali eyimbali ene-3 Harry Clarke windows ecaweni engentla kweNqaba / izibuko. Isangqa seDrombeg Stone, iLough Hind kukuhamba okufutshane okanye ukonwabele uxolo oluhle kunye nokuzola
Baleka kuyo yonke le nto-Ivalelweyo, indlwana ezolileyo ikwindawo ekhuselekileyo ecaleni kolwandle lwaseCastlehaven ethe yaphinda yakhiwa ngokutsha kwinxiwa eliyimbali! Ubutofotofo bale mihla, ubushushu kwaye ikhubalo lakudala kufutshane neBay enezikhitshane zokuloba iiyachts kunye neekayak ezindwendwela le ndawo isaziwa kakhulu eWest Cork. Ukuhamba ngesikhephe apha ukusuka entwasahlobo kuhle ukubukela. Ukufikelela ngokukhawuleza elunxwemeni okanye kwezinye iindawo zokuhlala kwiDrishane Estate kunye nolunye uhlobo lweelwandle umgama omfutshane kakhulu okanye uqhube kude.
Sinezindlu zeeholide ezi-3 ezidityaniswe ngumzila nangaphezulu kweCastlehaven strand /Beach. Zonke ii-cottages zine-cotton bedlinen kunye neetawuli
Ukuhamba umgama ukuya eKnockDrum kunye nelali eneMary-Anns Pub kukwazi kakuhle ukutya okumnandi okuvulekileyo unyaka wonke (ngaphandle kokusukela malunga ne-8 kaJanuwari) iGlandore kunye neManyano Hall zineendawo ezintle zokutya (10km kude) kunye nonyaka wonke.
Iilwandle ezi-3 zahluke ngokupheleleyo - iiPeebles, ishingle kunye nesanti etyheli ziqelelene ngemizuzu emi-5 kuphela. ICastletownshend inolwandle lwayo olunomtsalane kunye neequay ezi-2 kunye nalo lonke umtsalane wembali kunye nezindlu ezikhethekileyo zaseGeorgia ezihla ngeSitalato esikhulu ukuya kwizibuko kunye nenqaba enecawe engentla kwezibuko.
Umbuki zindwendwe ngu- Thomas And Jane
Sihlala kufutshane kwaye sonwabe kakhulu sikuncede ngalo naliphi na ixesha ngolwazi lwendawo
Ukuba ungayivuyela iBreakfast Hamper nceda usazise
UThomas And Jane yi-Superhost